Laptọọpụ nwere i9 processor: nke kachasị ike na ọrịre taa
Ndị ọrụ kachasị achọ na ọtụtụ ndị ọkachamara chọrọ kọmpụta dị ike. N'ozuzu, ndị kachasị ike na-edozi ma ọ bụ ụlọ elu, na nkọwa ya dị mfe: ka ohere ahụ buru ibu, ihe ndị ọzọ dị mma anyị nwere ike itinye. Ma ruo ọtụtụ afọ, laptọọpụ adịghị anya n'azụ, na n'isiokwu a anyị ga-ekwu banyere i9 laptọọpụ, ụdị PC nke ọ na-esiri anyị ike ịchọta ọrụ ọ bụla anyị na-enweghị ike ịrụ.
1 Laptọọpụ i9 kacha mma
2 Ụdị laptọọpụ i9 kacha mma
3 Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ i9?
4 I9 ma ọ bụ i7 laptọọpụ?
5 Laptọọpụ I9 nwere 32GB nke RAM na inch 17, nhazi ọkacha mmasị
6 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ i9 dị ọnụ ala
6.2 Ụlọikpe Bekee
6.4 Ihe PC
7 Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ i9 dị ọnụ ala?
7.1 Black Friday
7.2 Ụbọchị Mbụ
7.3 Cyber ​​Monday
Laptọọpụ i9 kacha mma
MSI WS66 10TM-043FR...
MSI Onye Okike Z16 ...
Ụdị laptọọpụ i9 kacha mma
Lenovo, onye aha ya bụ Lenovo Group, Ltd., bụ ụlọ ọrụ China tọrọ ntọala na 1984 na-emepụta ihe, na-arụpụta ma na-ere ụdị ngwaahịa eletrọnịkị niile, n'ime nke anyị nwere mobiles, mbadamba, smart televishọn na ihe ọ bụla ọzọ ihe na-agụnye sistemụ arụmọrụ, n'etiti ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na etinyere ya na ndepụta a, ọ bụ n'ihi na ngwaahịa ndị nwere sistemụ arụmọrụ gụnyere, n'ezie, kọmputa. Ugbu a, Lenovo bụ otu n'ime ụdị kachasị ewu ewu na ụwa nke kọmputa, karịsịa laptọọpụ, nke a bụ n'ihi na ya na ika anyị nwere ike ịchọta ihe niile, nke na-eme ka anyị nwee mmetụta na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ. nke ha dị ọnụ ala akụrụngwa.
Ma na Lenovo na-arụpụta laptọọpụ maka ụtọ niile: ị chọrọ kọmpụta dị ọnụ ala nke nwere ihuenyo inch 15.6 mana nwere ihe nwere uche na imewe? Ị nwetara ya. Ịchọrọ nke nta nke nwere akụrụngwa dị ike karịa? Ị nwekwara ya. Ịchọrọ kọmpụta dị ike nke nwere akụrụngwa kachasị mma na imewe maka egwuregwu ma ọ bụ iji rụọ ọrụ kacha achọ? Ọfọn Lenovo bụkwa ewu ewu maka kọmputa egwuregwu ha. Na, ọ bụ ezie na ndị kasị mma adịghị ọnụ ala, ha nwere uru dị mma maka ego, ya bụ, ihe anyị na-akwụ dị mma ma ọ bụ ọbụna na-erughị ihe anyị ga-akwụ na ụdị ndị ọzọ.
HP bụ ụlọ ọrụ California nke amụrụ na nkewa nke Hewlett-Packard. Tupu nke ahụ, e hiwere ụlọ ọrụ mbụ na 1939, na HP anyị niile maara taa bụ nke tọrọ ntọala na 2015. Ọ bụrụ na a ma ama maka ihe n'oge gara aga, ọ bụ n'ihi ndị na-ebi akwụkwọ ha, mana ha na-arụpụtakwa akụrụngwa kọmputa, ihe dị n'akụkụ ma na-enye aka maka ụdị ngwaọrụ ndị a. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Linux, ị ga-enwe mmasị ịmata ndị ha na-etolite HPLIP, ngwanro iji jikwaa ndị na-ebi akwụkwọ na sistemụ na kernel penguin.
DeepGaming Silex Pro - PC…
A bịa na kọmpụta, HP enweela ihe mgbago na mgbada ya. Ọtụtụ afọ tupu mgbasa na ọmụmụ nke ụlọ ọrụ nke abụọ, ha malitere ịmalite ngwá ọrụ dị ala karịa ka a tụrụ anya na ụdị dị otú a, nke mere na ndị obodo malitere enweghị obi ụtọ na ika ahụ. Ma obere oge ka ha nwetachara ala ma ọ dị ọzọ akara nrụtụ aka na ụwa nke kọmputa.
ASUS bụ ụlọ ọrụ na-arụpụta ma na-ere ihe niile ị ga-achọ na ụwa nke mgbakọ na mwepụ, site na nne na nna na eserese ruo na kọmputa, site na ụdị ọ bụla. Ọ bụ otu n'ime ndị na-eweta kọmputa kacha ukwuu n'ụwa, Na-eru nọmba 4 na 2015. Ụlọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala na 1989 ma si na Taiwan, na dị ka ụlọ ọrụ Asia, ọ na-enye ngwá ọrụ nwere ezigbo uru maka ego.
ASUS ROG Strix Scar 15…
N'ịbụ otu n'ime ndị na-emepụta kọmputa kasị ukwuu n'ụwa, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịhụ ka n'ime katalọgụ ya anyị na-achọta ihe niile anyị nwere ike iche n'echiche, site na netbooks kasị akọ, site na laptọọpụ etiti na nke dị elu na iru kọmputa desktọọpụ. Laptọọpụ gị bụ, n'echiche nke ọtụtụ mgbasa ozi pụrụ iche. otu ndị nwere oke nha nha na anyị nwere ike nweta maka ọnụahịa asọmpi, na ọkwa ya dị elu, anyị nwere laptọọpụ nwere i9 processor na-esonyere diski SSD kacha mma na nnukwu ebe nchekwa RAM nke na-agaghị enwe ọrụ ọ bụla nwere ike iguzogide anyị, na ihe a niile dị mma. -emebere akụrụngwa.
MSI, onye aha ya bụ Micro-Star International, Co ,. Ltd., bụ mba obodo Taiwanese nke teknụzụ ozi. Ọ bụ ọkachamara n'ichepụta na ire ngwaọrụ kọmputa, n'ime nke anyị nwere motherboards, kaadị eserese, sava, peripherals na ọbụna ụfọdụ maka ụgbọ ala. Banyere kọmpụta, ọ na-ere ma AIO (niile-na-otu), dị ka ụlọ elu ma ọ bụ kọmputa desktọpụ, laptọọpụ na ndị ọzọ dị ka kọmpụta mmepụta ihe.
Ọ bụ ezie na, dị ka anyị kwuworo, ọ na-arụpụta ma na-erekwa ụdị kọmputa dị iche iche, ọ na-abụkarị na mgbe anyị na-agụ mkpọmkpọ okwu MSI, ihe anyị nwere n'ihu anyị bụ kọmputa e zubere maka egwuregwu. Na ụlọ ọrụ nwere variants nke a ụdị ngwá, na ha bụ obere na ihe kacha mma na atụmatụ onye gamer nwere ike chọọ. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị iwu ederede, ọ bụ ihe ijuanya na ọnụahịa MSI dị ala karịa ihe a ga-atụ anya na kọmputa na ihe ndị dị na ya, na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị zụta ha na ụlọ ahịa pụrụ iche na nkwalite.
Huawei bụ ụlọ ọrụ tọrọ ntọala na China na 1987 na n'ime afọ iri gara aga aghọwo otu n'ime ndị na-emepụta teknụzụ kachasị n'ụwa. Ọ na-aghọ ihe ọchị otú e si chịa akara ahụ na mba ndị dị ka Spain ihe dị ka afọ iri gara aga, ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka akara China nke ọ dịghị onye maara ma chere na ọ dịghị mma. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ọchị ahụ na-apụ n'anya iji nye ohere na mmasị na nkwanye ùgwù, ebe ọ bụ na ugbu a, anyị na-ahụ ụdị ngwá electronic dị iche iche na ika gị na ihe niile nwere ezigbo uru maka ego.
Ọ bụ ezie na ebunye ha n'ụwa nile malitere n'ụwa nke telifon, ha na-ewu ewu ugbu a maka imepụta na ire ngwaọrụ ndị ọzọ, dị ka laptọọpụ. Ndị a bụ nnukwu nhọrọ ụbọchị ndị a, na-enye akụrụngwa haziri nke ọma, nke ọma na ndị ọzọ dị ike nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ ma ọ bụ rụọ ọrụ dị arọ. Ọ dị mma ịkọwa na ha na-erekwa akụrụngwa nwere ihuenyo mmetụ nke na-emegide Microsoft's Surface ozugbo, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịmasị karịa ndị a maka inwe ike iji otu sistemụ arụmọrụ na ngbanwe na ọnụ ala dị ala.
Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ i9?
Echere m na ọ bụ naanị ndị ọrụ na-achọsi ike. I9 bụ ihe nrụpụta Intel kachasị mma, yana arụmọrụ ya dị mma nke na ndị otu a hapụrụ n'ihe niile anyị na-agbalị ime. Ya mere, maka ajụjụ onye kwesịrị ịzụta ya, azịza ya ga-abụ na ndị ọrụ so n'ime atọ ndị a:
Ndị ọkachamara chọrọ ike kachasị. Ọ bụrụ na n'ọrụ anyị, anyị ga-eji onye na-edezi ibe weebụ, dị ka WordPress, anyị ga-edezi ederede, na-edebe ndekọ ego ma ọ bụ onye nchịkọta vidiyo dị mfe, i9 laptọọpụ abụghị maka gị. Akwụkwọ ndetu i9, ya na ndị enyi ya na-emebu (ihe ndị mejupụtara), emebere ya maka ọrụ dị arọ, dị ka iji onye na-edezi vidiyo ebe enwere ọtụtụ ọdịnaya iji nye ma ọ bụ egwu nwere ọtụtụ egwu, yana mmemme ndezi 3D ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ngosi. . Ebe anyị ga-achọpụta na arụmọrụ ga-abụ mgbe mbupụ, na-enye ma na-azọpụta faịlụ, kamakwa mgbe ahụghị ụfọdụ mbepụ na-ekpori ndụ na-aga n'ihu na kwụsiri ike animations mgbe niile.
Ndị egwuregwu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-edozi maka i7, ọtụtụ ndị egwuregwu na-ahọrọ laptọọpụ nwere i9 processor. Egwuregwu na-enwewanye eserese ka mma, textures na ụdị nkọwa dị iche iche, na ụzọ kachasị mma iji hụ ya niile na-enweghị ụdị ịkpụ bụ na otu egwuregwu dị mma. Na mgbakwunye, ọtụtụ n'ime ha na-agbasa egwuregwu ha na ndụ, yabụ na ha chọrọ nnukwu akwara na i9 nwere ike inye ihe niile ịchọrọ.
Ị nwere ego fọdụrụ? Ọ bụkwa maka gị. Laptọọpụ nwere ihe nrụpụta i9 dị oke ọnụ, ọ bụkwa n’ihi processor n’onwe ya na akụkụ ndị ọzọ ọ na-agụnyekarị. Dị ka mgbe anyị zụrụ ụgbọ ala, ọ bụrụ na anyị nwere ike imeli ya, anyị na-ahọrọ ụgbọ ala "zuru ezu", na njikwa ihu igwe ya, ndị na-ahụ maka windo, stereo dị mma, ezigbo wiil ... ihe niile. Ụgbọ ala ndị a na-agụnyekarị usoro nchebe pụrụ iche, n'ihi ya, ọ na-esiri anyị ike ịhụ ihe ijuanya na-atụghị anya ya n'ụdị ụkọ. Ọ bụ otu a ka ọ dị na kọmpụta: ọ bụrụ na anyị azụta nke kachasị ike, anyị nwere ike ọ gaghị achọ ihe ọ bụla ọ na-enye ọtụtụ oge, mana ọ bụrụ na anyị chọkwuru ike, laptọọpụ i9 na-ekwe nkwa ya.
I9 ma ọ bụ i7 laptọọpụ?
Maka ihe ndị akọwapụtara na isi ihe gara aga, m ga-ekwu nke ahụ n'ọtụtụ ọnọdụ ọ bụ nhọrọ kacha mma i7. I9 bụ ihe nhazi ka mma, n'ezie, mana ọ na-abịa na ọtụtụ RAM, ezigbo draịva siri ike, na mgbe ụfọdụ nnukwu ihuenyo. Ọ bụrụ na anyị gbakwunye processor dị ike karị, RAM, disk, ihuenyo na eleghị anya kaadị ndịna-emeputa, ọ ga-eme ka ọ bụrụ nnukwu ego, n'ihi ya, ọ bụghị uru ya n'ọtụtụ ọnọdụ.
Ma dịkwa ka anyị kọwara n'elu, ihe niile dabere na ojiji anyị ga-eji ya, yana n'ikike ịzụrụ ihe. Ọ bụrụ na ọ bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ ma anyị chọrọ ịrụ ọrụ na nkwa niile na arụmọrụ kacha mma, n'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ ka mma ịhọrọ i9. na ihe ndị ọzọ dị elu karị. Ọ ga-efu anyị ego karịa, mana ọ gaghị abụ ihe akwụ ụgwọ, mana itinye ego anyị ga-emezi ka oge na-aga. Maka ndị na-egwu egwuregwu, okwu ahụ bụ otu ihe ahụ: ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu ọkachamara, ego ahụ ga-akwụghachi gị n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe omume ntụrụndụ dị ezigbo mkpa na ndụ gị, anyị niile dị njikere itinye ntakịrị ihe iji mee ihe na-eme ka anyị nwee obi ụtọ. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu na-achọkarị obere ihe, ị ga-enwekwa mmasị na laptọọpụ nwere i7.
Laptọọpụ I9 nwere 32GB nke RAM na inch 17, nhazi ọkacha mmasị
Otu n'ime laptọọpụ ndị a na-achọsi ike ugbu a bụ nke na-eji i7 processor yana ihe na-erughị 8GB nke RAM. Ha na-ewu ewu n'ihi na ha na-enye arụmọrụ dị mma na ọnụ ahịa nke ọtụtụ n'ime anyị nwere ike imeli, ya mere, anyị họọrọ ha karịa i5 ka ọ dịkwuo mma. Mana nke ahụ bụ maka nkezi onye ọrụ chọrọ iji kọmpụta ha nwere mmetụta ka mma. Mgbe ole anyị na-ekwu maka ndị ọrụ chọrọ ihe ọzọ, ndị a na-edozi karịa na otu ọzọ, nke na-achịkọta ihe ndị a:
Intel i9. Ihe nhazi Intel kacha mma nke ga-enye anyị ohere ime ihe niile na nnukwu ọsọ.
32GB Ram. Ee ọ dị ukwuu. N'ezie, 8GB nke RAM karịrị ezuru maka ọtụtụ ọrụ, mana ọ bụghị maka ndị chọrọ ime ihe kacha njọ. Ka RAM na-abawanye, anyị nwere ike inwekwu oghe, nke a bụkwa ihe a na-ahụ anya na mmemme dị ka ndị na-edezi vidiyo nke anyị nwere ike ịnwe usoro iheomume dị ukwuu, na otu ihe ahụ nwere ike ikwu na ngwanrọ ọdịyo, mana na ọnụ ọgụgụ nke egwu. Enwere ike ịnwe RAM ọzọ, mana echere m na nke ahụ ga-abụrịrị maka ọdụ ụgbọ na ibu ọrụ ndị gaferela ọkachamara, ya bụ, ugbua maka ụlọ ọrụ.
17 inch ihuenyo. Ndị na-achọ i9 na-eme ya ka ọ rụọ ọrụ nke ọma dị ka o kwere mee, na nnukwu ihuenyo, otú ahụ ka ọdịnaya na nkọwa dị mma anyị ga-ahụ. Nke a na-amasịkwa ndị na-egwu egwuregwu, bụ ndị mgbe ha nwere ike iji kọmpụta ụlọ elu na akụkụ ka ha nwee ike ịhọrọ òké, ụdị keyboard na ihuenyo buru ibu.
Na nke dị n'elu, kwa ị nwere ike itinye nnukwu draịvụ ike SSD, nke ga-emekwuwanye arụmọrụ ma kwe ka anyị chekwaa ọtụtụ ozi, ihe dị mkpa na-atụle na anyị ga-arụ ọrụ na nnukwu mmemme na faịlụ.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ i9 dị ọnụ ala
Amazon bụ ụlọ ọrụ e-azụmahịa nke na-ararakwa onwe ya maka igwe ojii na ọgụgụ isi. N'ihi ya, anyị nwere ụlọ ọrụ na-enye sava ya na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọzọ, onye enyemaka nke Alexa, n'etiti ihe ndị ọzọ, na otu n'ime ụlọ ahịa ịntanetị kachasị mkpa n'ụwa.
Na Amazon anyị nwere ike ịhụ ụdị edemede niile, rere n'onwe ha ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị ọzọ na ha na-ere site na portal ha. Ọnụ ahịa na nkwa bụ ihe kacha mma anyị ga-ahụ na ntanetị, yabụ, ihe ọ bụla anyị na-achọ, ọ bara uru ịnweta ha dị ka nhọrọ.
El Corte Inglés bụ otu nkesa zuru ụwa ọnụ nke dabere na Spain nke mejupụtara ụlọ ọrụ nke ụdị dị iche iche. Ọ bụ ezie na e nwere echiche dị iche iche, ọ dị ka ọ na-enweta aha ya site n'ụdị bekee na-eji ejiji bekee, ọ bụkwa ya. otu n'ime akụkụ ya kachasị mkpa bụ ejiji, Ebe anyị nwere ike ịhụ uwe dị ka uwe, karịa ihe nkịtị ma ọ bụ ọbụna egwuregwu.
Na El Corte Inglés anyị nwekwara ike ịhụ ihe ndị ọzọ, dị ka ndị metụtara eletrọnịkị, na ha dị ma n'ụlọ ahịa anụ ahụ ha, nnukwu ụlọ ahịa ọtụtụ ụlọ ahịa na-abụkarị n'obodo ukwu, na n'ime ha. ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. E hiwere El Corte Inglés na 1940, ma ọ bụrụ na ọ dịlarị na ezigbo aha ruo ugbu a, ọ bụ n'ihi na ọ na-enye ngwaahịa dị mma na ezigbo nkwa.
Carrefour si France bịa, nke amaburu na mba ndị dị ka Spain dị ka kọntinent. Ọ bụ ihe nkesa nke afọ gara aga bụ naanị n'obodo ukwu, mana ha etoola nke ọma ka ha nwee ike ịnọ n'obodo nta nwere obere ụlọ ahịa. Na Carrefour anyị nwere ike ịzụ ahịa anyị kwa ụbọchị, ebe anyị na-ahụ nri, ịdị ọcha ma ọ bụ ngwaahịa batrị maka obere ngwaọrụ eletrọnịkị.
Na nnukwu ụlọ ahịa ya, ndị nọ n'obodo ukwu, ma ọ bụ na ụdị webụ ya anyị nwere ike chọtakwa ngalaba eletrọnịkị N'ime nke enwere mbadamba, ekwentị mkpanaaka, ngwa ụlọ na kọmpụta dị, dị ka kọmpụta i9 nke ndị ọrụ ọkachamara ma ọ bụ ndị egwuregwu na-achọkarị.
Ngwa PC bụ ụlọ ọrụ tọrọ ntọala na Spain na 2005. Na mbụ, ebumnuche ya bụ ire ere kọmputa na components maka ha, mana ka oge na-aga, ha gbasaa katalọgụ ha wee reekwa ihe ndị ọzọ metụtara ngwa eletrọnịkị dịka igwefoto. Ha na-arụ ọrụ na Spain na Portugal, na nso nso a, ha emepewokwa ụlọ ahịa anụ ahụ n'obodo ụfọdụ. Ma ọ bụ na akụrụngwa PC bụ ọnụ ụzọ azụmaahịa eletrọnịkị, ya bụ, a na-eme ọtụtụ ahịa ya n'ịntanetị.
N'iburu n'uche na ọ bụ ụlọ ahịa pụrụ iche na ire kọmputa (na akụrụngwa maka ha), ọ bụ a Nhọrọ mara mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta laptọọpụ, ihe ọ bụla anyị chọrọ. Na mgbakwunye, ha na-enyekarị ọnụ ahịa dị mma, ihe na-amasị anyị karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-achọ i9 ebe ọ bụ na ha na-abụkarị ngwá ọrụ dị oke ọnụ.
Mediamarkt bụ ụlọ ọrụ tọrọ ntọala na 1979 na Germany, n'ebumnobi nke ire ere akụkọ metụtara ngwa eletrọnịkị ndị ahịa. Ọ bụ ọtụtụ nnukwu ụlọ ahịa, ọ bịakwara ná mba ndị dị ka Spen ihe karịrị afọ iri abụọ gara aga. Site na mgbe ha rutere, ha malitere inweta ewu ewu n'ihi ọnụ ahịa asọmpi ha, n'agbanyeghị na ha na-anọkarị naanị n'obodo ukwu.
Mediamarkt na-akwalite onwe ya na slogan "Abụghị m onye nzuzu", nke na-ezo aka n'eziokwu na anyị ga-ama ihe ma ọ bụrụ na anyị zụrụ n'ụlọ ahịa ha n'ihi na anyị ga-azụta. mgbe niile na ọnụ ahịa dị mma. N'ime katalọgụ ya, anyị ga-ahụ ekwentị mkpanaaka, mbadamba ihe, igwe onyonyo, igwe ịsa akwa, ngwa ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi na ngwa ụlọ na kọmpụta, dịka kọmpụta i9 kachasị ike maka ndị ọrụ na-achọsi ike.
Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ i9 dị ọnụ ala?
Ọ bụrụ na ị nụtụbeghị okwu Black Friday, olee ebe ị nọ na afọ ole na ole gara aga? Enwere ike ịghọta ntakịrị na ị maghị ihe ọ bụ ma ọ bụ ebe o si bịa, mana ọ ga-abụrịrị na ị nụrịrị ya. Black Friday na-abịa site na United States, ọ bụkwa ihe omume ire ere nke amụrụ n'ebumnobi ịkpọ anyị òkù ịzụrụ ihe mbụ ekeresimesi. Emere na Fraịde, ụbọchị na-esote Ekele.
N'oge Black Friday anyị ga-ahụ ego dị mkpa na ụdị ụlọ ahịa na ngwaahịa niile, na mbelata ego ga-adabere n'ụzọ dị ukwuu na ewu ewu nke ihe na nnweta ya. Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ kọmputa, ma ị nwere ike ichere ruo November, Black Friday bụ oge dị mma ịzụta laptọọpụ gị i9 na nhazi ọ bụla ị nwere ike ịchọrọ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa nke Amazon, ị kwesịrị ịma banyere ya Ụbọchị Mbụ. Ma ọ bụ kama, ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Amazon Prime, nke a na-akpọbu Premium. Ma ọ bụ na ụlọ ahịa e-commerce a ma ama na-enye nke ya mmemme ire ahịa maka ndị ahịa gị kacha mma, anyị bụ ndị debanyere aha na Prime. Ọ na-abụkarị ụbọchị abụọ, a na-eme ya n'October na n'ime ha, anyị ga-ahụ ego ndị anyị na-agaghị achọta n'oge ọzọ.
N'oge ihe omume Prime Day anyị ga-ahụ puku kwuru puku ngwaahịa na ọnụ ahịa mbelata, na ire ahịa nwere ike ịka njọ. Na mgbakwunye na ahịa nkịtị, ha na-enye Flash, nke na-enwekwa mbelata nha nha dị ụtọ karịa, mana ọ dị naanị mgbe ihe ga-adịru. Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Amazon na ị na-eme atụmatụ imeghari akụrụngwa gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụrụ nke dị ọnụ ala dị ka laptọọpụ i9, Prime Day nwere ike ịbụ otu n'ime nhọrọ gị kacha mma.
El Cyber ​​Monday Ọ bụ ụbọchị nke abụọ o si Amerịka bịa ịkpọ anyị ka anyị zụọ ahịa Krismas. Ọ na-eme ememe na Monday mgbe Black Friday na, na tiori, ọ bụ ụbọchị na nke Akụkọ metụtara teknụzụ ga-ahụ ka ọnụ ahịa ha dalata. Okwu ahụ bụ "Cyber" gụnyere n'ihi nke a, mana ọ bụghị eziokwu mgbe niile na ụfọdụ ụlọ ahịa na-enyekwa ụdị akụkọ ndị ọzọ.
N'ịbụ ụbọchị nke ọnụ ahịa ihe niile metụtara teknụzụ na-agbada, Cyber ​​​​Monday nwere ike ịbụ ụbọchị zuru oke iji megharịa kọmputa anyị, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-atụle ịzụrụ nke nwere ihe ndị dị elu dị ka nke a na-etinyekarị na laptọọpụ i9.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nhazi » I9 laptọọpụ